China DASQUA High Precision 6 Inch / 150mm Solika sy IP67 Waterproof Digital Micrometer miaraka amina LCD Screen Fanamboarana sy Factory | Dasqua
DASQUA High Precision 6 Inch / 150mm Menaka ary IP67 Waterproof Digital Micrometer misy Screen LCD lehibe
Tsy ny IP67 ihany amin'ny fanoherana ny rano sy ny vovoka, fa koa ny fahaiza-manaporofo ny menaka tsara;
Ireo singa elektronika voaisy tombo-kase hanatsarana ny fahaizany manohitra ny rano;
Ny valanoranom-bato dia mampiakatra ny marina amin'ny fandrefesana;
Surface of the ground ground (Parallelism latsaky ny 0,015, 20% tsara kokoa noho ny mahazatra) mba hahazoana antoka ny fivezivezena milamina eraky ny;
Sarimihetsika nomerika lehibe kokoa ho an'ny famakiana mora (20% lehibe kokoa noho ny efijery mahazatra);
fehezan-dalàna isan-karazany vahaolana A B C D L araka ny marina
2015-1005-A 0-150 / 0-6 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 40 20 15.5 16 235 0.02 / 0.001 ″
2015-1010-A 0-200 / 0-8 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 50 24 19.5 16 287 0.03 / 0.0015 ″
2015-1015-A 0-300 / 0-12 ″ 0.01 / 0.0005 ″ / 1/128 60 26 21.5 16 390 0.03 / 0.0015 ″
Anaran'ny vokatra: Caliper nomerika sy tantera-drano tsy tantera-drano
Item isa: 2015-1005-A
Faritra fandrefesana: 0 ~ 150 mm / 0 ~ 6 ''
Fahamarinana: ± 0.02 mm / 0.001 ''
Fanapahan-kevitra: 0,01 mm / 0,0005 '' / 1/128 ''
• Tsy ny IP67 ihany amin'ny rano sy ny vovoka, fa ny fahaiza-manaporofo ny solika tsara ihany koa: fiarovana IP67 avo roa heny amin'ny fidirana amin'ny vovoka, ny rano famafazana amin'ny lafiny rehetra sy ny tasy menaka;
• Miaraka amin'ny singa elektronika voaisy tombo-kase hanatsarana ny fahaizany manohitra ny rano;
• Valan'ny valanorano mba hampiakarana ny mari-pahaizana fandrefesana;
• Kalitaon'ny indostrialy: Toeran'ny velaran-tany (Parallelisme latsaky ny 0,015, 20% tsara kokoa noho ny mahazatra) hahazoana antoka ny fivezivezena milamina eraky ny;
• Ny LCD Display dia lehibe kokoa noho ny famakiana mora (20% lehibe kokoa noho ny efijery mahazatra);
• Ny vatan'ny caliper dia vita amin'ny vy tsy matevina kilasy voalohany, miaraka amina fika sy farany, ny fonon'ny fonenana dia mandray fitaovana firaka zinc. Ny fananganana metaly rehetra dia miantoka ny androm-piainan'ny caliper lava kokoa ary mety kokoa amin'ny fampiasana indostrialy isan-karazany. Ny valanoranony dia mifanaraka sy tapaka tsara.
Calipers, izay mety ho Vernier, dial na digital, dia fitaovana maro samihafa amin'ny fandrefesana ny halavany.
Ny caliper nomerika dia azo ampiasaina handrefesana ny halavany, ny savaivony na ny savaivony ivelany, ny hateviny. savaivony anatiny sns. Ny caliper nomerika eto amintsika dia miasa tsara amin'ny famolavolana ala, fanaovana firavaka sns, be mpampiasa amin'ny sehatry ny tokantrano, ny indostria ary ny fiara, safidy lehibe ho an'ny mekanika, injeniera, mpiasan-kazo, fialamboly sns….
• Fandrefesana ny savaivony ivelany: refesina haingana ny zavatra kely na lehibe amin'ny valanoranony vita amin'ny vy maranitra;
• Fatra refy amin'ny savaivony: refesina haingana ny savaivon'ny zavatra misy valanoranony ambony;
• Fatra fandrefesana: ny safidin'ny fandrefesana marobe dia misy fiasa lalina ho an'ireo zavatra madinidinika izay sarotra zahana amin'ny mpitondra mahazatra;
• Fatra refesina: ny fiasan'ny caliper tsy arahi-maso dia mamela anao hampiasa ny dingana ambadiky ny caliper handrefesana koa;
Ataovy madio hatrany ny velaran'ilay kalifera Vernier, sorohana ny ranon-javatra tsy hiditra ao amin'ilay slider ary aza atsobika anaty rano izany;
Ny tany dia tokony diovina moramora amin'ny alikaola. Aza asiana voltre mihitsy amin'ny caliper ary aza mampiasa penina elektrika eo aminy;
1 x Micrometer nomerika solika sy tantera-drano